धुनमा गर्न सबैभन्दा सफल साथमा जाने वस्तु: धेरै लोभ्याउने व्यञ्जनहरु
अधिकांश मानिसहरू लागि धुनमा एक दैनिक पकवान छैन। यो बिदाको लागि तयार र पकवान बस सबै भन्दा राम्रो भावना लागि प्रतीक्षामा छ। मुख्य घटक एक उत्कृष्ट थियो भने यो अत्यन्तै निराशाजनक छ, तर स्थिति धुनमा एउटा पक्ष पकवान SPOILED छ। जो चरा र यसको छाया को स्वाद जोड पेश गर्न राम्रो छ, हामी खातामा लास नै र अन्य महत्वपूर्ण nuances को तयारी को विवरण लिएर, यस लेखमा बुझ्न हुनेछ। त्यसपछि टेबल मा मुख्य पकवान उहाँलाई विराजमान मान्छे निराश कहिल्यै।
को धुनमा एउटा पक्ष पकवान: छ जो राम्रो र किन
मुख्य कारक चराहरूले लागि "साथी" को विकल्प निर्धारण - विशेष गरी धुनमा मासु। पहिले, यो एकदम फैटी हो, त्यसैले यसलाई अतिरिक्त बोसो अवशोषित हुनेछ भन्ने कुरा लिन्छ। दोस्रो, धुनमा को मासु चिकन भन्दा एक कम हदसम्म हुनत, dryish छ। तेस्रो, यो हो जो सबै प्राण एक peculiar गन्ध, छ। त्यो हो, धुनमा एउटा पक्ष पकवान यसको स्वाद रुप बदल्नु पर्छ। छैन सबै भन्दा राम्रो समाधान - आफ्नो मसला र जडीबुटी स्कोरिङ। अन्तमा, जो खाना एक धुनमा लागि उपयुक्त, यो लास को सबै भन्दा तैयारी को विधि को दृश्य मा आवश्यक छ निर्णय गर्नुहोस्। उदाहरणका लागि, एक धुनमा कागति, लगभग सबै भन्दा उत्तम हरियो जैतून संग चामल गर्न साथमा जाने वस्तु संग तयार भने। र तपाईं कालो जैतून तिनीहरूलाई प्रतिस्थापन भने, साँच्चै पछुताउनु - स्वाद गुणस्तर कडा प्रभावित छ।
धुनमा को बहुमत धेरै यसमा मासु रूपमा भरी पकाएको, तर उपचार को यो विधि संग पटकमा सबै समस्या समाधान गर्न। सबै भन्दा लोकप्रिय "भराई" - antonovka छ। स्याउ संग धुनमा एउटा सिद्ध साथमा जाने वस्तु - एक फल आफूलाई। बस मनमा राख्न मा निवेश भएकाहरूलाई, खाने लागि राम्रो नभएको। सबै को पहिलो, तिनीहरूले बोसो अवशोषित, र यसैले स्वाद यो सौम्य, राख्नु अनौठो गर्न, बाहिर जान्छ। साथै, यी स्याउ mush गर्न लगभग गर्नाले, आफ्नो संरचना गुमाउन। पुरा फल पकाना गर्दा साक्षर Housewives बस फाल्नु र garnish obkladyvayut लास लागि।
को बन्दागोभी बारेमा केहि शब्द
धुनमा सबै भन्दा राम्रो साथमा जाने वस्तु - मान्छे नव पनि छ कि बन्दागोभी थाहा छैन, एक चिकन भन्दा अन्य चरा सुखा। यो संयोजन उत्कृष्ट परिणाम, खुसी र आँखा र नाक, र पेट दिन्छ। बन्दागोभी को तयारी गर्न मात्र दृष्टिकोण responsibly र competently छ। पहिलो Shinko तंग टाउको। तपाईं परम्परागत कटौती, स्ट्रिप्स, वर्गहरूको लागू गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईं बन्दागोभी काट्नु गर्न सक्नुहुन्छ। गोभी नुनीन र अनुभवी छ; मसला को toque प्राथमिकताहरू मा चयन गरिएका छन्, तर तिनीहरू grated अदुवा को एक सानो बिट हुन छ। साफ स्याउ र diced को एक जोडी; गाढा छैन, तपाईं कागति को रस संग छिडकना गर्न सक्नुहुन्छ। को धुनमा रस दिनु सुरु गर्दा यो सबै पैन सम्म थपियो। यसको बोसो र बन्दागोभी तयार गर्नुपर्छ। उहाँले तरकारी मा बर्ड को लास देखि छुट्टी रूपमा थप्छ। धुनमा एउटा भव्य साथमा जाने वस्तु संग एकै समयमा तयार हुनेछ।
कच्चा बन्दागोभी सजिलै sauerkraut प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। व्यक्तिगत स्वाद को एक प्रश्न र खाना पकाउने खुला ढक्कन संग बाहिर छ - उनको स्याउ यो घटना थप कि गर्न।
सधैं सफल धुनमा तरकारी आपूर्ति छ। चराहरूले लागि सामान्यतया पर्याप्त एक सलाद - यसको कच्चा फारममा मात्र यसलाई अन्य समर्थन गर्न एक पूरक हुन सक्छ। तर सुखा वा stewed तरकारी - के तपाईं आवश्यक छ। धुनमा गर्न प्यारा तरकारी साथमा जाने वस्तु यसरी तयार गर्न सकिन्छ।
Rutabaga कट semicircles मोटाइ सेन्टिमिटरले। त्यस्तै कद्दू कटौती गरिएको छ। Prostilaetsya पाक चर्मपत्र, यो तरकारी वनस्पति तेल संग sprayed र thyme पाउडर संग छिडकना छन् decomposed। तिनीहरूले एक घण्टा को एक चौथाई बारेमा पाकेका हुनेछ। यो समयमा, पातलो स्ट्रिप्स, मूल parsnips crumbles त्यसपछि - गाजर। तिनीहरूले हल्कासित कागति को रस, धुनमा बोसो र मसलाहरु संग मिश्रित संग sprayed। तरकारी, मरिच solyatsya ओवन हटाउन, तयार स्ट्रिप्स complemented र पनि फिर्ता नै समय पठाइयो।
मनपर्ने र tubers पनि कम्पनी बनाउन सक्छ पोलेको धुनमा। तथापि, सामान्य Mashed आलु - यो रोचक छ। यसलाई अगाडि बढ्न निम्नानुसार राम्रो छ। लसुन एक सानो टाउको पन्नी मा पनि कस छैन र्याप र आधा एक घण्टा ओवन मा मार्फत सुखा। यो समय मा लसुन ध्यान गुमाउनु हुनेछ र पकवान स्वाद prikopcheny दिनेछु। यो आलु मानक तरिकामा उसिनेर छ, त्यसपछि यसलाई फैटी क्रीम र घिउ संग मसले देखि बनेको छ। यो शान गर्न लगभग मार हुन्छ, मसले आलु, जायफल संग अनुभवी sagging पोलेको लसुन, कटा ताजा साग र मरिच। एकरूपता दिन पिटाई एक सानो थप - र धुनमा एउटा सुन्दर पक्ष पकवान तयार छ! धेरै को लागि यो सबै भन्दा राम्रो र सबै भन्दा मनमोहक छ।
अपडेट संग विधा को क्लासिक
परंपरागत सेवा अनाज स्याउ संग एक धुनमा संग सेवा गरे। मा सिद्धान्त, सुरिलो संस्करण। तर, छुट्टी तालिका मा सामान्य गडबड नीरस हेर्न। थप "जटिल" संस्करण हुन प्रलोभनमा पार्न। प्रति अनाज, शान्त आगो पानी को दुई चश्मा र शिथिल एक ढक्कन ढाकिएको: यो एक राम्रो croup, unground, को नियम अनुसार पीसा लाग्छ। porridge languishing बेला, एक मध्यम आकारको प्याज आधा छल्ले मा कटौती, र मशरूम खुली - ठूलो स्लाइस। दुवै सामाग्री अन्तिम तयार गर्न तला छन्। अनाज स्वादिष्ट तेल, zazharki जोडिएको, डिल र साग संग स्वादिष्ट को धुनमा बाहिर राखिएको छ।
उम्दा: सुन्तले रङ चटनी
तपाईं धुनमा एउटा असामान्य साथमा जाने वस्तु बनाउन चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले पक्कै आफ्नो सबै अतिथिहरूको प्रभावित हुनेछ कि एक पकवान निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँलाई लागि, पीसा सिरका सिरप र चिनी बराबर रकम लिइएका। thickened गर्दा दालचिनी, चोट खुर्सानी मरिच र कसा भयो अदुवा संग स्वादिष्ट। Tangerines साफ र स्लाइस मा disassembled छन्। Shallots सूक्ष्मता crumbled र फल संग मिश्रित। शायद यो सिरप 80 डिग्री गर्न cooled छ, तिनीहरूले चटनी भरिएको थियो, र पकवान संग्रह पहिले देखि नै छ शांत जारी। धुनमा धेरै, असामान्य मूल र स्वादिष्ट खाना!
बाल सदन मा tableware: को nuances अन्वेषण
क्यालोरी पानी र दूध: "हर्कुलेसक्लस्टर"। के क्यालोरी तयार भोजन निर्धारण गर्छ?
क्यालोरी तला अन्डा बारे थप विवरण
Stewed पाइक: व्यञ्जनहरु को एक चयन
तातो भर्ने "Chim-Chim": कोरियाली भोजन र यसको रहस्य
कोलेजन casings: प्रकार, आवेदन, र ससेज व्यञ्जनहरु sosisek
पागलपन - यो के हो? senility
रहस्यमय "प्रतिशोध": विरोध मास्क
तुलना सेन्ट पीटर्सबर्ग र मास्को: को भूगोल, जलवायु, इतिहास, योजना र आर्थिक क्षमता
सनकी संयन्त्र: गरौं गरेको हेर्न
एक निश्चित व्यक्तिगत प्रस्ताव कसरी चिन्न
सम्मान कलाकार - रैंक वा शीर्षक?
जल बन्धन। लगाइँदै। स्थापना। प्रोफाइल नाली
Ditkovskite Agnes: अभिनेत्री को जीवनी र व्यक्तिगत जीवन
रेम्ब्रान्टका र आफ्नो काम को संक्षिप्त जीवनी
कार को अवलोकन KAMAZ 4326